कुन तेलमा पकाएको खानेकुरा खाँदा स्वास्थलाई फाइदा हुन्छ ? – Clickmandu
कुन तेलमा पकाएको खानेकुरा खाँदा स्वास्थलाई फाइदा हुन्छ ?
क्लिकमान्डु २०७७ भदौ ३० गते १५:०३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । तेल प्रत्येक मान्छेको भान्सामा अनिवार्यजस्तै छ । विश्वका हरेक मानवजातिले भान्सामा तेलको प्रयोग गर्छन् । मानव शरिरका फ्याट आवश्यक पर्छ । जसका लागि तपाईंहामी तेलको प्रयोग गर्छौं ।
तर तपाईंले आफ्नो भान्सामा कुन तेलको प्रयोग गर्दा स्वास्थका लागि लाभदायक हुन्छ भनेर जानकारी दिने उदेश्यले यो सामाग्री तयार पारिएको हो ।
तपाईंहामी कुनै न कुनै रोकको शिकार भएका हुन्छौं । तपाईंको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रकारको समस्या छ, सोही अनुरुप तपाईंले आफ्नो भान्सामा खाने तेलको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
खाना पकाउनका लागि तेलक धेरै विकल्पहरू छन । तर, कुन तेल स्वास्थ्यको लागि उत्तम छ त ? खाना र स्वास्थ्यको बारेमा चिन्तित व्यक्तिहरू प्रायः यो प्रश्न सोध्छन् ।
पकाउनको लागि प्रयोग गरिने तेलहरू प्रायः यसको फलहरू, बिरुवाहरु, बीऊहरु वा नटहरुद्वारा निर्धारण गरिन्छ ।
तिनीहरू क्रसिंग, प्रेस वा प्रसंस्करणद्वारा निकालिन्छन् ।
पोलीअनसेच्युरेटेड फ्याट्टी एसिड
तेलको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको यसमा फ्याटको एक महत्त्वपूर्ण मात्रा समावेश छ । यसमा संतृप्त फ्याट, मोनोस्याचुरेटेड फ्याट र पोलीअनसेच्युरेट फ्याट्टी एसिडहरू हुन्छन् ।
केही वर्षअघि नरिवलको तेल स्वास्थ्यको हिसाबले उत्तम मानिन्थ्यो । धेरै मानिसहरूले यसलाई सुपरफूड घोषणा गरेका थिए ।
केही व्यक्तिहरूले दावी गरे कि यो तेल फ्याटकोरूपमा जम्मा गर्न असम्भव छ । यद्यपि हार्वर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धानले नरिवलको तेललाई ‘शुद्ध विष’ को संज्ञा दियो ।
यसको कारण यो हो कि एक व्यक्तिको शरीरले धेरै बोसो पचाउन सक्दैन । र, धेरै बोसो हाम्रो शरीरमा जम्मा हुनथाल्छ । जसले स्वास्थ्य समस्याहरु निम्त्याउँछ । जस्तैः मुटुको रोग र रक्तचाप निम्त्याउँछ ।
बेलायतमा सरकारको दिशानिर्देशमा भनिएको छ कि एक पुरुषले दिनमा ३० ग्रामभन्दा बढी र महिलाले २० ग्रामभन्दा बढी तेल खान हुँदैन ।
यसकारण पनि बुझ्नुहोस् कि तेलमा फ्याट्टी एसिड कणहरू हुन्छन् । जो मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकुल मानिन्छन् ।
ररगतको मात्रा डबल बन्धनसँग सम्बन्धित छ, जुन असंतृप्त फ्याट भनिन्छ । फ्याटी एसिडहरू जो साना चेनहरुमा बाँधिएका छन्, रगतमा सीधै विघटित हुन्छन् । र, शरीरको उर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस् । यद्यपि चेन फ्याट्टी एसिडहरू कलेजोमा सीधा जान्छ । यसले हाम्रो रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँछ ।
नरिवलको तेलबारे अनुसन्धान भन्छ कि यसले हाम्रो शरीरमा कम घनत्व लाइपोप्रोटिनको मात्रा बढ्छ । लाइपोप्रोटिन सीधा हृदयघातसँग सम्बन्धित छ । यद्यपि नरिवलको तेलले उच्च घनत्वको लाइपोप्रोटीन पनि प्रदान गर्दछ, जसले रगतबाट लाइपोप्रोटीन तान्छ ।
फर्टी एसिड र भिटामिन
प्रोफेसर टेलर वालेस वर्जीनियाको जर्ज मेसन विश्वविद्यालयका भन्छन्,- ‘एचडीएलमा लौरिक एसिड भन्ने रसायन हुन्छ, जसलाई सी १२ फ्याट्टी एसिड भनिन्छ । यो लामो चेन फ्याट्टी एसिड हो, जो कलेजोमा भण्डारण हुन्छ । यसले स्वास्थ्य समस्याहरू सिर्जना गर्दछ ।’
त्यसकारण, विज्ञहरु भन्छन- कि तेल खान उत्तम छ जुनमा संतृप्त फ्याटको मात्रा कम हुन्छ । र, यो थोरैमात्र खानुपर्छ ।
पोलीअनसेच्युरेटेड फ्याट र ओमेगा तेल खान उत्तम छ । यसले रगतमा कोलेस्ट्रोलको स्तर कम गर्दछ । र, शरीरलाई आवश्यक फ्याट्टी एसिड र भिटामिनहरु प्राप्त हुन्छ ।
मुटु रोगीहरुको डर
धेरै तेलहरुमा बहुअनस्याचुरेटेड र मोनोस्याचुरेटेड फ्याटको साथ फ्याट्टी एसिडको मात्रा बोट र तेल निकाल्ने प्रक्रियामा निर्भर गर्दछ ।
एउटा सर्वेक्षणले पत्ता लगायो कि जैतुनको तेलको अत्यधिक प्रयोगले मुटु सम्बन्धी रोगहरुको जोखिमलाई ५ देखि ७ प्रतिशतले कम गर्छ ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयको टीएच चान स्कूल अफ पब्लिक हेल्थका वैज्ञानिक मार्टा गौश फेरेले २४ बर्षदेखि १ लाख मानिसहरुको अध्ययन गरे।
तिनीहरूले पत्ता लगाए कि सबै प्रकारका जैतुनको तेल प्रयोग गर्नेहरुमा मुटु सम्बन्धी रोगहरुको जोखिम १५ प्रतिशतले कम भएको छ ।
जैतुनको तेलको फाइदाको लागि मुख्य कारण यसमा फेला परेको मोनोस्याचुरेटेड फ्याट्टी एसिडहरु हुन् । भिटामिन, खनिज, पोलीफेनोल र बोटबिरुवामा पाइने अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वहरू समावेश गर्दछ ।
मार्टा भन्छिन् कि जैतुनको तेल प्रयोग गर्दा हाम्रो खानासँग सम्बन्धित अन्य हानिकारक फ्याट्टी एसिडहरूबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ । जैतुनहरु फ्याँकेर तिनीहरूका पल्पबाट जैतून निकालिन्छ । यसलाई स्वास्थ्यवर्धक तेल भनिन्छ । जुन हाम्रो पेटमा पाइने ब्याक्टेरियाहरूको लागि पनि राम्रो छ । यस कारणले, मुटुको रोगहरु कम हुन्छन् ।
जैतुनको तेलले पनि क्यान्सर र मधुमेह हुनबाट बचाउँछ ।
भूमध्य आहारको अटुट भाग
स्पेनको भलेन्सिया युनिभर्सिटीका प्रोफेसर फ्रान्सिस्को बार्बाले भनेका छन्, ‘जैतूनको तेलमा पाइने फ्याट्टी एसिड र अन्य तत्वहरूले पनि हामीलाई गैरसंक्रमित रोगहरूबाट जोगाउँछ । किनकि यसले हाम्रो शरीरलाई चाहिने तत्वहरू समावेश गर्दछ ।
भूमध्य सागर वरपरका मानिसहरु पर्याप्त मात्रामा जैतुनको तेल प्रयोग गर्छन् । यसलाई भूमध्य आहारको अटुट भाग भनिन्छ । र, भूमध्य आहार संसारको स्वास्थ्यकर्मी आहार मानिन्छ ।
केही वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि जैतुनको तेल यस आहार स्वस्थ हुनुको सब भन्दा ठूलो कारण हो ।
तर मार्था भन्छिन्, ‘भूमध्य सागरको वरिपरि खाने र पिउने संसारको अन्य क्षेत्रको तुलनामा नट, फलफूल र बढि तरकारीहरू छन् ।’
त्यसोभए, जैतुन तेलमात्र होइन, सम्पूर्ण खाद्य स्वास्थ्यको प्यारामिटरमा भूमध्यसागरको खानाको पछाडि छ ।
थोरै मात्रामा तेल खानु ठीक
अन्वेषकहरुले पत्ता लगाए कि अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा पनि आहार लिनाले रगतमा ग्लूकोजको स्तर कम गर्दछ ।
केही व्यक्तिहरू भन्छन् कि अतिरिक्त कुमारी जैतूनको तेल लिनु अझ स्वास्थ्यकर छ ।
यद्यपि स्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन् कि यसको उच्चस्तरमा एन्टिअक्सिडन्ट र भिटामिन-इ छ । यद्यपि यो एकदम कम तापक्रममा तात्छ । जसकारण यस तेलका धेरै पोषकहरु तताउने क्रममा नष्ट हुन्छन । त्यसोभए यसलाई कच्चा सेवन गर्नाले स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ ।
२०११ मा युरोपियन खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणले जैतुनको तेल उत्पादकहरूलाई उनीहरूले यो तेलले अक्सिडेटिभ तनाव कम गर्नसक्ने दावी गर्न अनुमति दियो । त्यस्तैगरी अतिरिक्त वर्जिनल जैतूनको तेल पनि कम तातोमा तताएर खाना पकाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
जे होस्, तेल जेसुकै भए पनि थोरै मात्रामा खान उचित हुन्छ ।
यो समाचारमा पश्चिमी डाईट र यसको खानाको अनुसन्धानको आधार बनाइएको छ । नेपालमा मानिसहरुले तोरी, सनफ्लावर, भट्टमास, सरसिउँ लगायतका तेलहरु खाना पकाउन प्रयोग गर्छन् ।
निष्कर्ष यो हो कि जुनसुकै तेल तपाईले खान्नुहुन्छ, यसलाई धेरै नतताउनूहोस् । बारम्बार तताएर तेल प्रयोग नगर्नुहोस् । यो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुनेछ । (बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा)
तपाईंलाई तनाव बढ्न थाल्यो ? यी हुन् तनाव कम गर्ने ११ उपाय
कोरोनाः शरीरिमा प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन के खाने के नखाने ?